uPVC Ọkụ Kachasị mma & Ndị na -emepụta ihu na ndị na -eweta ya
Kpọọ Anyị 24/7
8/33 Kirti Nagar Mpaghara Mpaghara, New Delhi
Ọkpụkpọ uPVC kọlụm
Ọkụ mkpuchi uPVC
uPVC Piezometric Ọkpọkọ
Ọkụ nrụgide uPVC
uPVC ọkpọkọ ọkpọkọ
Ngwa owuwe ihe ubi mmiri ozuzo
Akụkọ & Mgbasa ozi
Ọkụ mkpuchi Lee Range Budata Katalọgụ
Kedu ihe kpatara VINYL uPVC Pipes
Polyvinyl chloride (uPVC) na -enweghị nkọwa, dabara adaba maka iwu olulu mmiri.
Njupụta dị elu nke uPVC na -etinye uPVC na uru a ga -eji na olulu mmiri.
Pipe uPVC nwere nrụgide nrụpụta dị oke elu nke 55N/mm. Mgbatị ha dị elu, na -enye ha ohere iru isi ike achọrọ, nke a na -egbochi nrụrụ na -achọghị na ọkpọkọ.
Pipe uPVC na -eguzogide ihe niile etisara na mmiri ala, gụnyere asịd na nnu. N'ịbụ ndị na-eguzogide mmiri nke pH dị n'etiti 2-12, kemịkalụ a na-eji maka nhicha, mmepe, na ịmụba olulu mmiri (ma ihe ọkụkụ ma nke anụ ahụ) anaghị emetụta ọkpọkọ ndị a.
N'ịbụ ọkpọ ọkpọ plastik nke Vinyl uPVC Casing PIpes na-enye nguzogide na-enweghị atụ na mbibi kemịkalụ, na corrosion, jikọtara ya na inwe mmekọrịta enyi na enyi bụ ihe kpatara Vinyl Tubes Pvt. Ltd. Ịhọrọ imepụta ha.
Nnagide okpomọkụ dị elu na ịdị fechaa nke ọkpọkọ uPVC na -enye aka na obere ọrụ ha na ụgwọ mbupu ma na -eme ka uPVC pipụ bụrụ nhọrọ maka ịrụ ọrụ dị arọ.
Esemokwu dị obere
Oke Ibu Ibu
Ihe akaebe 100% leak
Na -eduga n'efu na igwe anaghị agba nchara
Ike mmetụta Izod dị elu
Vinyl Tubes ụlọ ọrụ na-emepụta uPVC na-eme ọkpọkọ uPVC ka ọ dabara na ọkpọkọ ọ bụla chọrọ na nrụpụta akụrụngwa ọ nwere ike bụrụ na gas, mmanụ, ịgba mmiri ma ọ bụ mmịpụta mmiri.
Ọkụ ọkpọ na akwa akwa vinyl uPVC emebela onwe ha maka ntụkwasị obi, yana ndekọ egosipụtara na mpaghara nrụpụta mmiri. Emebere ha maka ngwa mgbapụta na atụmatụ ndọda.
Ọrụ kacha mma, ogologo ndụ & mgbapụta efu bụ ihe ejiri mara Vinyl HDPE/MDPE PIpes. Ezubere maka: Ngwa geothermal, sistemụ nnyefe mmiri nke ime obodo na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nkesa gas sitere n'okike, mmiri mmiri, nhazi ala, sistemụ ọkpọ mmiri, mmezi ọkpọ.
Sistemu mkpuchi uPVC nke ọma
Vinyl Tubes na -emepụta sistemụ uPVC nke ọma nwere ike gbada ruo omimi ruo 600m. Ndụ nke afọ 50+ na-enye ndị ahịa ihe ngwọta ogologo oge.
A na -emepụta ọkpọkọ Vinyl Piezometric iji gboo mkpa nyocha na nyocha saịtị. Ha dị oke mma maka saịtị nleba anya, nlele nke mmiri dị n'ime ala, nleba anya mmiri na ntinye nke logger data.
Sistemụ Mmiri Wellpoint:
uPVC Casing Pipe ụlọ ọrụ Vinyl Pipes ewepụtala usoro ịsa mmiri vinyl nke nwere ike ịba uru nke ukwuu n'ibeda tebụl mmiri ala n'ime ala nwere obere ịdị n'otu na ike. Ọ dị mma maka ọwa mmiri na-emighị emi ebe ọkwa mmiri kwesịrị ịdị ala karịa mita 15-20. Sistemụ mmiri vinyl nke ọma na -enye gị ohere ịgbapụta site na galọn ole na ole n'otu nkeji na ezigbo silts aja aja ruo ọtụtụ narị na puku puku galọn kwa nkeji na gravel na aja siri ike.
Ọ na -egosipụta isi ihe dị mma agbasiri gburugburu olulu mmiri ma jikọta ya na nkụnye eji isi mee. Nke a, n'aka nke ya, ejikọtara na otu ma ọ bụ karịa nfuli. Igwu olulu miri emi ga -achọ ọtụtụ ọkwa nke sistemu akọwapụtara nke ọma n'ihi mmachi oghere nke mgbapụta ahụ.
A na-esonyere ọmarịcha ngwa ọrụ na ngwa mma nke na-enyere aka na nrụnye nke uPVC Casing ọkpọkọ nke ọma. Ngwa ndị a dị maka oke niile.
Sistemụ Casing uPVC miri emi
Kedu ihe kpatara VINYL Pipes ji bụrụ Bet kacha mma?
Ihe nkwụnye ma ọ bụ njikọta kacha elu
Ihe nnweta ihe mkpuchi mmiri2
Ihe nnweta ihe mkpuchi mmiri3
na -abịa n'oge adịghị anya
Omume Kacha Mma
N'ịbụ onye na-eduzi njikwa mmiri mmiri ISO 9001, akara nrụpụta ọkpọ sitere na India, anyị na Vinyl Tubes, na-elekọta mkpa njikwa mmiri gị niile.
Kpọtụrụ Companylọ ọrụ
8/33 Kirti Nagar Mpaghara Mpaghara, New Delhi -110015, India
gịnị mere ọkpọkọ vinyl
Debanye aha na Akwụkwọ akụkọ anyị & Ihe omume ugbu a ka emelitere gị.
Nwere ajụjụ? pịa ebe a
2021 Echekwara ya niile
Nweta Onyinye Na-enye Aka
Nweta ego 5% ozugbo!
Jikọọ na ndị ọkachamara anyị